Daawo: Culumada Warsheekh oo ka qeyliyey ‘fisqi iyo fasahaad uga yimaada Muqdisho - Aayaha
Culumaa’uddiinka degmada Warsheekh ee cilmiga iyo diinka loo do onto, kana tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa cabasho iyo qeyla dhaan ka muujiyay dhalinyaro mudooyinkii danbe u baashaal iyo damaashaad tegayay xeebta degmadaasi oo ah meel indhaha u roon, isla markaana laga dhisay hoteel habeenadii muusik iyo heeso laga shido.
Sheekh C/raxmaan Macallin Axmed Sheekh Cabdi Celi oo ah dhasha Sheekha xushmada ku dhex leh culumada qaadariyada iyo guud ahaan umadda Soomaaliyeed ayaa fariin qeyla dhaan ah kasoo saaray dhalinyarada u damaashaad taga degmada Warsheekh.
Sheekha ayaa sheegay in ay indhaha ka qabsan waayeen wax uu ku sheegay macsi illaahey xarimahay, isla markaana degmada Warsheekh lagu bartay fidinta diinta iyo in cilmi loo soo doonto.
“Haddaan nahay culumadii Warsheekh ee diinka loo soo doonto, waa u fiirsan weynay, waxaa beryahaan nagu soo badanay dad badan oo Xamar kasoo yaacayo oo leh dalxiis ayaa u soconaa, oo leh rag iyo dumar qaawan, waxaana indhaha ka qabsan weynay macsi dhalinyaradaasi iyo fasahaad ay noo soo rareen” ayuu yiri Sheekh C/raxmaan oo sheegay in culumada Warsheekh ay yihiin culumao tusbaxyo haysato, cida wax ka qaban kartana ay tahay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdi Waare iyo madaxweyne Farmaajo maadaama kitaabka Illaahey ay ku dhaarteen in ay wax ka qabtaan fahasaadka kasoo cusboonaaday degmadaasi diinka iyo cilmiga loo doonto.
Wuxuu sheegay Sheekh C/raxmaan in masjidkii caanka ahaa ee Sheekh Abiikar Mixraar oo ku yaal xeebta Warsheekh, biyaha baddana dhinacyada ka garaaca in habeenadii ay ku dul caweeyaan, iyagoo wixii ay doonaan ku fuliya, halka qaarkood ay iyagoo qaawan sawiro usoo aadaan.
Qeyla dhaantaan ayaa ka danbeysay markii halkaasi hotel laga dhisay, milkiilaha hotellkana uu dhalinyarada maalinta khamiista iyo jimcaha uu dhalinyarada iyo fannaaniinta ka kaxeeya Muqdisho si uu hotelkiisa ganacsi ugu sameeyo, waxaana ay kasoo duubaan muuqaalo anshax iyo diin ahaan u wanaagsaneyn, culumada Warsheekhna ay arrintaasi u arkaan mid sumcad xumo ku ah degmada oo ah meel diinka iyo cilmiga loo soo doonto.
Previous articleQiso xanuun badan: Laba arrimood filo hadii aad guursato lammaane ajanabi ah
Next article‘Weird’ things women do when they get jealous
Aayaha editor - December 11, 2018 0
Waa dhaawac daran marka ay haweeney aad shukaansaneysid ay kuu sheegto inaysan markaas wixii ka dambeeyo aysan ku jecleyn, maxay ku burburisay jacaylkii idinka...